IMMMS | Xariirka Mareegta | Maareynta Dhacdooyinka - daraasad xaaladeed - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daraasad Xaalad: IMMMS
Integrated Tafaariiqda Suuqgeynta & Maareynta Maareynta Badeecada (IMMMS) waa mid ka mid ah nidaamkan oo keliya oo aan bixinaynin faahfaahin kasta oo yar oo ku saabsan dhacdooyinka dhacaya ama dhici doona laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku habayso natiijooyinka sumadaha, dhacdooyinka dhacdooyinka, tirada lab iyo dheddig, iwm. Nidaamkani waxa uu fududayn doonaa aqoonsiga guryaha oo ku salaysan danaha sumadda waxana uu ballan-qaadayaa in uu adeegyo naadir ah gaadhsiiyo macaamiisheeda qiimaha leh. IMMMS waa qalab muhiim u ah shirkadu si ay ula kulanto ganacsi Shuruudaha iyo waa mid ka mid ah nidaamka naxariista leh oo hab-dhaqankiisa guusha leh iyo isticmaalkiisa kaliya ma dhalin doono dakhli dheeri ah shirkadda laakiin wuxuu farsameyn doonaa dhammaan hawlaha la xiriira ganacsi. Madal ka hor, JTG waxay ku koobnayd NASCAR oo keliya dhacdooyinka, laakiin nidaamkan, aqoonta domain ee shirkadu si fiican ayaa looga qaadan karaa si kor loogu qaado kobaca dakhliga. IMMMS marka laga reebo inuu yahay nidaam aan caadi ahayn sidoo kale wuxuu leeyahay qaar caqabadaha oo la xiriirta suurtagalnimada haddii isticmaaleyaasha summaddu ay si buuxda u qaadan doonaan nidaamka cusub ee u hoggaansan naqshaddiisa iyo astaamihiisa iyo haddii kaleba.
Waxaa jiray loolan culus oo lala xiriiriyay IMMMS sida loo sameeyo horumarinta Isku-dubarid iyo habayn lahaa qaybo tiro badan oo ah dhacdooyinka laga soo bilaabo ilo kala duwan si loogu diyaariyo calaamado u baahan inay buuxiyaan ganacsi ujeedooyinka waqti go'an. Baahida loo qabo in lagu xajiyo fursado badan oo kafaala qaadis ah si loo aqoonsado ku habboon summadaha iyo hantida, kordhinta dakhliga iyo kafaala-qaadka sii haynta iyo si taxaddar leh oo waafaqsan shuruudaha sida kala duwanaanshaha qiimaha hantida, noocyada ka qaybqaadashada iyo ku-dhaqanka tafaariiqda, waxay ahayd in la kala saaro.
Xalka Heerka Sare
IMMMS si kastaba ha ahaatee way isticmaashaa sirdoonka macmal Algorithm kaas oo ku dara shaqada raadinta si ay awood ugu siiso noocyada ka qaybqaata inay isla markiiba helaan guryaha iyagoo dooranaya jaantus muujin doona raxan xulashooyin badan oo leh xulashooyin la beegsaday oo la jaan qaadaya kuwa maxalliga ah iyo kuwa kale. dhacdooyinka ugu danbeyn. Natiijooyinka ku jira database waxaa lagu sifeeyaa iyadoo la raacayo dookhyada raadinta kuwaas oo ah xeeladaha iyo mudnaanta ay micneeyeen calaamad kasta oo lagu diiwaan geliyey database.
Shuruudaha raadinta badan IMMMS -ka sirdoonka macmal algorithm wuxuu u oggolaanayaa magacyadu inay raadsadaan xulashooyinka ugu fiican oo leh aragti faahfaahsan oo ku saabsan guri kasta.
Gaarsiinta kafaala qaadayaal badan - Hufnaan iyo dhammaystirnaan nidaamkani wuxuu ka dhigayaa mid si fudud ugu fududeeyayaasha iyo magacyadu inay raadsadaan hantida saxda ah iyo dhacdada iyo la-hawlgalayaasha magac wadaagga isla markaana ay markaa hagaajiyaan cabbiraadaha kafaala qaadaya
Fududeynta aqoonsiga hantida - Nadiifinta guryaha ku saleysan miirayaasha kala duwan sida ujeedooyinka sumadda iyo tafaariiqleyda, goobaha tafaariiqda, tirada dadka, goobaha, iwm.